News | Tag: medicine
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी औषधिको मूल्य घटाउने विषयमा आफ्नो प्रशासनले काम गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।
औषधी खाइरहनु भएको छ ? जुसहरु पिउँदा यस्ता कुरामा ध्यान दिनुहोस् !
एजेन्सी–हाल धेरै जसो मानिसहरुको भागदौड जीवन चलिरहेको छ । वर्तमान लाइफस्टाइलका कारण मानिसहरु बिमारी हुने गर्छन् । यस्तैमा चिकित्सकहरु औषधीको साथसाथै फलफुलको जुस पिउन सल्लाह दिने गर्छन् ।
ग्यास्टिक तथा अल्सरसाथै यी समस्याहरूको अचुक औषधी !
थाहा पाउनुहोस् धेरै औषधि खाँदा कस्तो असर पार्छ ?
औषधी खाइरहनुभएको छ ? यी जुस पिउँदा ध्यान दिनुहोस्
यसकारण धेरै औषधिको प्रयोग नगर्नुहोस्
एजेन्सी–वैज्ञानिकहरुले गरेको एक अध्ययनले दैनिक ५ वटाभन्दा बढी औषधिको चक्की लिनुले वृद्धहरुलाई झन् कमजोर बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।
यसकारण पाँच चक्कीभन्दा बढी औषधी नखानुहोस्